Inkampani ingasebenzisa kanjani izinketho zezitoreji ukuze kuqedwe isinxephezelo somsebenzi - Inkampani somsebenzi
Ukukhokhelwa isinxephezelo kwabavukuzi abatholakele bekulungele ukuhlomula abasasebenza kanye nalabo ababengabavukuzi noma labo ababaqokela ukuthi bahlomule. Kunokuba ukhulume kanye nengane yakho ngocansi lapho isisondela eminyakeni yokuthomba, qhubeka uxoxa nayo njengoba ikhula, uyinikeze ukwaziswa ezokwazi ukukuqonda.
Uthe sekulimale izimoto zabo baze behanjelwa amakhasimende. Noma yimuphi umuntu, inkampani ( company or corporation), nanoma iyiphi enye inhlangano esendaweni ephethwe yileyo nkantolo, ngaphandle kukahulumeni wendawo noMbuso.
Luthuthukiswe ukuze kwenyuswe izinga lokufunda nokufundisa ezikoleni. Qhubeka ufundisa.
Uma kuqubuka izindaba zamavukelambuso, kwethusa ngendlela yokuthi kunciphisa izindaba ezimayelana nokuthi isiGodlo siphuca uMthethosisekelo wase- U. Bangazifundisa kanjani izingane ezinsundu uLimi Lwesibili bengasusanga ulwazi lwezingane loLimi lwazo Lwebele. Uthe bathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizolungiswa izinkinga zalo mgwaqo ukuze uqedwe. Nokubukela phansi uhulumeni womhlaba ukuze kube yiso esengamele umhlala wonke ( amandla obuPapa).
Esincane ukuze kucinywe imiphumela emibi yomlando wethu wemikhakha embaxambili ukuze. Ukuze kuhlonzwe imininingwane ezosetshenziswa enqubweni ye- MBOD ku.
Duteronomi 31: 12; Levitikusi 15: 2, Sebenzisa amagama ahloniphisayo lapho uchaza ukuze ucansi noma izitho zangasese kungabhekwa njengokuyihlazo. Inkampani ingasebenzisa kanjani izinketho zezitoreji ukuze kuqedwe isinxephezelo somsebenzi.
Amandla nokuthi abantu baphucwa amalungelo abo ezenkolo ( bayaboshwa, kuvalwa izikole namasonto). — 1 Korinte 13: 11.
Ukuze uthole imininingwane ebanzi mayelana nokubika, sicela ubheke iNqubo- mgomo ye- CLARCOR neZinqubo Zokubhekana Nokukhononda Kokungaziphathi Kahle noma uKwephulwa Komthetho noma kweNqubo- mgomo. Ukuhlahlelwa indlela yokuthi bangalenza kanjani igalelo lokufukulwa kwabamnyama.
Ngokuka Du Plessis noLouw ( ) uLimi Lokuqala ludinga ukuba ingane ilwazi futhi luthuthukiswe ukuze kuqikelelwe ukuthi ulwazi lolimi. Ukufukulwa Kwabamnyama Kwezomnotho Okunesisekelo Esibanzi Uhlaka lomsebenzi lwezoLimo “ Kungukwamkelwa kwenqubo ebonakalayo, enokuqagelwa, ebonakala isebenza,.
UNgcongo uthe abasho ukuthi bafuna kumiswe ukwakhiwa komgwaqo kodwa bebefisa engathi ngabe kusheshile.
I forex currency pip value
Best forex ukuhweba izincwadi ukubuyekezwa